Maxay Wargeysyada Spain Ka Qoreen Guushii Taariikhiga Aheyd Ee Ay Xalayto Barcelona Ka Gaartay Paris Saint-Germain?
Friday March 10, 2017 - 08:56:20
Markii ugu horeysay warbaahinta Isbaanishka ayaa ahaa kuwa mideysan, wargeysyada ka soo baxa Madrid iyo Barcelona ayaa u muuqday kuwa ugu yaraan mideysan maanta. Ka dib markii ay Barcelona 6-1 ku xasuuqday PSG oo ay u soo baxday wareega sideed dhamaadka Champions League iyagoo dhanka kale u rogay guuldarro 4-0 oo soo gaartay lugtii hore, wargeys walba waxa uu amaanay kooxda Catalans.
Jariiradaaha AS iyo Marca oo labada Madrid ka soo baxa una janjeera dhankaas ayaan iska indhotirin wixii xalayto dhacay sida ay marar badan sameeyeen marka ay Barcelona guul weyn gaarto.
“Finalkii ugu weynaa! Lix gool, lix, taariikh lagu sameeyay” aya lagu qoray bogga hore ee jariirada Marca, iyagoo hoosta ka xariiqay soo laabashadii mucjisada aheyd ee suurtogalka uu ka dhigay goolkii uu Sergi Roberto dhaliyay daqiiqadii 95aad.
“Soo laabashadii ugu cajiibsaneyd” ayay sidoo kale ku qoreen warbixintooda ciyaarta, “seddex gool todobadii daqiiqo ee ugu danbeysay.”
Si kastaba, waxa ay xuseen inay soo laabashada suurtogal ka dhigtay ‘fadeexad garsoore iyo PSG oo liidatay’, waana wax ay sidoo kale jariirada AS iyagana ay hoosta ka xariiqeen.
“Soo laabasho uu mudaharaad la socdo” ayay ku qoreen bogooda hore, iyagoo sheegay in kooxda Faransiiska iyo garsoore Deniz Aytetik inay ‘la gubteen cabsi’.
“Garsooraha ayaa gacan fidiyay” ayuu ku cawday Santi Gimenez oo warbixinta ciyaarta u qoray AS, inkastoo uu qoraaga Barca ku amaanay soo laabashadooda cajiibka laheyd iyo mucjisadii uu hogaamiyay Neymar, waxa uu sidoo kale qoray: “Camp Nou wax sidaan oo kale ah hore uma arag.”
Jariirada u janjeerta dhanka Barcelona ee Mundo Depotivo ayaa cinwaan weyn ka dhigatay “Habeenkii geesiyaasha” iyagoo sidoo kale soo qaatay hadal uu yiri tababataha PSG Unai Emery kaasi oo ahaa: “Waa qaladkeena, waa qaladka garsooraha, waana qaladka Barcelona.”
Wargeyska kale ee Barcelona u janjeera ee Dairio Sport ayaa iyagana bogooda hore ku soo qoray: “Waxaad tahay halyeey” ka hor inta aysan ciyaaryahan walba oo Barcelona ah siinin qiimeyn 10kiiba 10 ah.
Luis Mascaro oo maqaal ku qoray wargeyska ayaa yiri: “Ha waarto hooyadii ku dhashay – 6-1 waxa ay geli doontaa taariikhda Barcelona, taariikhda Champions League iyo taariikhda kubada cagta.”